Comment Obtenir plus de J'aime sur Instagram : 15 Talooyin iyo Apps ugu Fiican
Sida loo helo likes badan Instagram-ka : 15 Talooyin iyo Apps ugu Fiican
Likes ayaa ah lacagta ugu qaalisan ee Instagram-ka. Marka boostadaada Instagram ay hesho waxyaabo badan oo jecel, waxa ay u muuqataa in ay ka sarreyso wararka isticmaalaha.Adiga oo kordhinaya tirada waxa aad jeceshahay, waxa kale oo aad dammaanad qaadaysaa muuqaal weyn oo qoraaladaada mustaqbalka ah, sababtoo ah algorithm-ka madalku wuxuu isku dayaa inuu dadka tuso wax badan oo ay hore u xiisaynayeen.
Waxaan isu diyaarinay hagahan sida loo helo Instagram jecel si uu kaaga caawiyo helitaanka faa'iidooyinkan..
Halkan waxaa ah shan iyo toban soo jeedin:
Instagram News Automation. Qaybi Sawirro Tayo Sare leh
Waa inay tagtaa iyadoon la odhan, laakiin dad badan ayaa dhayalsada muhiimada ay leedahay in la helo sawiro tayo sare leh. Ma heli doontid waxyaabo badan oo jecel haddii sawirkaagu yahay mid dahab ah, pixelated ama aad u madow.
Instagram News Automation. Abuur Qoraallo Xiiso Leh
Haddii soo dejinta sawiro tayo sare leh ay lama huraan tahay, kuma filna ; Sharaxaadaadu sidoo kale waa inay noqotaa mid xiiso leh, soo jiidasho leh ama hodan ku ah qiimaha dheeraadka ah.
Instagram News Automation. Isticmaal Wicitaan Ficil
Dhegaystayaashaadu ma awoodi doonaan inay ku siiyaan waxaad rabto haddii aanad u sheegin waxaad rabto. Kaliya ku dar wicitaanka ficilka dhamaadka qoraalkaaga si aad u codsato Like. Codsi naxariis leh oo fudud ayaa laga yaabaa inuu si weyn u kordhiyo imaanshaha..
4. Fahamka Dhegaystayaashaada
Horay ayaad u maqashay, oo haddana waad maqli doontaa. Waxaad u baahan tahay inaad barato dadka aad beegsanayso.
5. Ku dar Goob-joojin Boos kasta
Marka ay dadku weydiiyaan sida loogu helo jecel Instagram, Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah in la arko haddii ay isticmaalayaan geotagging sawiradooda. Waa kan qoraalka “goobta” oo ka muuqda sawirka korkiisa.
6. Maalin walba, Like iyo Comment saar
Ma doonaysaa in aad ogaato sida loogu helo likes on Instagram? Waa inaad bixisaa ! Instagram waa waddo laba dhinac ah. Waxaad u baahan tahay inaad waqti ku qaadato la dhaqanka dadka haddii aad rabto inaad hagaajiso ka qaybgalkaaga.
7. Isticmaal Hashtag ku haboon
Ma doonaysaa in aad ogaato sida aad uga heli lahayd likes badan Instagram-ka ? Isticmaal hashtag sax ah ! Tani waa lama huraan ma aha oo kaliya in la kordhiyo waxa aad jeceshahay, laakiin sidoo kale dhammaan istiraatiijiyaddaada Instagram.
8. Ku dhiiri geli kuwa kale “Ku calaamadee Ami”
Si aad u hesho waxyaabo badan oo jecel Instagram, sawiradaadu waa inay arkaan dad badan. Adeegso wicitaan fudud oo ficil ah kaas oo ku dhiirigeliya dhagaystayaashaada inay ku calaamadeeyaan saaxiib boostadaadii ugu dambeysay si aad dhaqso u kordhiso tirada taraafikada quudintaada.
9. Si joogto ah u isticmaal Sheekooyinka Instagram
Sheekooyinka Instagram Waxay leeyihiin 500 milyan isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta adduunka oo dhan laga bilaabo Janaayo sanadkan, taasoo tilmaamaysa in sheekadu ay aad muhiim u tahay in la iska indho tiro. Isticmaalka Sheekooyinka kaliya kuma ogola inaad gaarto dhagaystayaal ballaadhan, laakiin sidoo kale waxay wadi kartaa taraafikada qoraaladaadii dhawaa waxayna si dhakhso ah u horumarin kartaa waxyaabaha aad jeceshahay!
10. Kor u qaad astaantaada aad jeceshahay ama Martigeliso Sfs
Waxa aad beryahan daba socotay xisaab gaar ah ? Ogaysii adiga oo ku xusaya maqaalladaada ama sheekooyinkaaga. Qof kasta oo lagu calaamadeeyay maqaalkaaga wuxuu heli doonaa ogeysiin, waxaana hubaal ah inay ku iman doonaan quudkaaga oo ay ku siin doonaan qaar jecel.
11. Ku sheeg Xisaabaadka Ehelkaaga Boostadaada
Qoraal kasta oo aad dhejiso, calaamadee dadka iyo shirkadaha ay khusayso. Ku dhejinta qoraalladaada waxay la mid tahay siinta canaanto ilaa inta laga ogeysiinayo tixraaca., taas oo soo jiidata dareenka astaanta iyo dhagaystayaasheeda!
12. Abaabulaan tartan
Martigelinta tartanka Instagram ma aha oo kaliya madadaalo taageerayaashaada, laakiin sidoo kale waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa jeceylkaaga iyo is-diiwaangelintaada. U sheegida ka qaybgalayaasha in ay tahay inay jeclaadaan shaygaga si ay tartanka u galaan waxay kaa caawin kartaa inaad si weyn u kordhiso waxyaabaha aad jeceshahay..
13. La Soco Platformyada Kale
Kor-u-qaadista walxahaaga ayaa tusaale fiican u ah sida loogu heli karo waxyaabo badan oo jecel Instagram-ka. Maadaama aysan dhammaan dhagaystayaashaadu si joogto ah u arki doonaan qoraalladaada Instagram, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in maaddadaada Instagram ay heli karto xubnaha dhagaystayaashaaga shabakad kasta oo bulsheed oo aad adeegsato.
14. Si joogto ah u daabac
Ma filan kartid inaad hesho jacayl badan haddii dhagaystayaasha bartilmaameedka ahi aanay daawanayn maqaalladaada. Jadwalka dhajinta joogtada ah ayaa ka dhigaya ganacsigaaga meesha ugu sareysa maskaxda dadka, Ku hel meel wanaagsan oo aad la socoto algorithm-ka Instagram oo aad si weyn u kordhin kartaa waxa aad jeceshahay min jir ilaa qaab.
15. Xayeysiis Lacageed
Waxa ugu dambeeya ee aad samayn karto si aad u kordhiso jeceylkaaga Instagram waa in aad la falgasho beddelka xayaysiisyada lacagta lagu bixiyo ee Instagram.. Guud ahaan, waxaan kugula talineynaa adeegsiga xayeysiiska lacag bixinta si loogu kaxeeyo booqdayaasha bogga xorta ah ama iibka bilaashka ah, laakiin xayaysiisyadu waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad hesho jacayl badan.
4-ta App ee ugu Wanaagsan ee laga helo Likes badan Instagram-ka
Si kastaba ha ahaatee, fikradahan kuma filna inay kaa caawiyaan inaad kor u qaaddo waxyaabaha aad jeceshahay Instagram-ka. Isticmaalka apps ayaa ku caawin kara ka heli likes badan Instagram. Waxay u ekaan kartaa wax la yaab leh sida iibsashada taageerayaasha, laakiin tani waa xaalad gebi ahaanba ka duwan.
Instagram News Automation. Kobac Bulsho
Waxaa ku jira dhammaan sifooyinka iyo awoodaha ay u baahan yihiin dadka u baahan inay maamulaan akoonkooda Instagram.. Waxaad awoodi doontaa inaad qeexdo profiles gaar ah oo aad raacdo, marka lagu daro like-ka tooska ah. Grow Social sidoo kale waxaa ku jira jadwalka jadwalka maqaallada iyo Sheekooyinka.
Instagram News Automation. Like4Like
Like4Like waa mid ka mid ah apps-ka ugu fudud ee lagu helo Likes. Software-kani waxa uu u shaqeeyaa isaga oo isku ururinaya isticmaalayaasha oo ka dhigaya sida waxyaabaha dadka kale ; fariimaha badan ee aad jeceshahay, inta aan jeclahay dib ayaad u helaysaa.
Instagram News Automation. Likulator
Likulator wuxuu u shaqeeyaa wax yar si ka duwan barnaamijyada kale ee raadinta Jaime. Waxay ka dhigtaa waayo-aragnimada mid aad loogu riyaaqo iyadoo lagugu abaalmariyo qadaadiicda aad jeceshahay qoraallada dadka kale iyo daawashada xayaysiisyada., Taas oo aad markaas ku beddesho “waan jeclahay” iyo “is-diiwaangelinta”. Software-ka sidoo kale waxaa ku jira hashtags si ay kaaga caawiyaan inaad caan ka noqoto.
4. Jeclahay Hash
Jeclahay Hash, dhanka kale, waa fududahay oo fududahay in la isticmaalo. Waxaa lagugu soo jeediyay inaad gasho, markaas liiska mowduucyada ayaa laguu soo bandhigayaa, kaas oo aad ku dooran karto hashtag aad jeceshahay. Ka dib markii la daawado xayeysiisyada qaar, App-ka ayaa ku siin doona boqolaal jecel.
Maqaal horeSi toos ah Instagram: Bot Loogu Jecel Yahay Automatic
Maqaalka XigaSida loogu Helo Taageerayaal badan oo Instagram Sheet khiyaameeya : #Hagaha n ° 1